Onye ga-emeri agba nke 11 Tour de France? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nsonaazụ Tour de France nke 11 - azịza ohuru
Nsonaazụ Tour de France nke 11 - azịza ohuru
Onye ga-emeri agba nke 11 Tour de France?
Ndi Cavendish mere ka oge belata oge 11?
Wout van Aert-enweta mmeri nke 11!
Onye mmeri mba Belgian na-eguzo ogologo na pedals ka ọ na-agba nke anọMmeri nke Tour de Francenke ọrụ ya - ọ kachasị ihe kachasị mma: mmeri nke agba abụọ mbu nke Mont Ventoux.4 awa gara aga
Na 2013 Tour de France bụ nke 100th Tour de France. Ọ malitere site na June 29, 2013 ruo July 21, 2013 wee bido n'obodo Porto-Vecchio na Corsica, na agwaetiti ahụ na-ebute ụzọ atọ mbụ. Corsica bụ naanị mpaghara mepere emepe, na Corse-du-Sud na Haute-Corse bụ naanị obodo ndị mepere emepe na-agabigabeghị mbụ, ndị na-ahazi chọrọ ijikọ mbipụta nke 100 nke njegharị ahụ na nleta mbụ nke Corsica.
Oghere mmalite bụ usoro ụzọ dị larịị ọ bụghị oge ikpe mmadụ ma ọ bụ 'okwu mbido'. Iji nabata ndị njem n'oge ha nọrọ na Corsica, ndị na-ahazi ọrụ ụgbọ mmiri a na-akwụ ụgwọ ụgbọ mmiri Mega Smeralda iji nabata ndị otu nzukọ, ndị mgbasa ozi na ndị ọzọ metụtara njem ahụ na ịnabata nzukọ ndị nta akụkọ, agbanyeghị na ndị ọkwọ ụgbọ ahụ nọ na họtel na na Porto. Vecchio nọrọ. Oge 129 June 2013 - Porto-Vecchio ruo Bastia, 213 km Oge mbu nke agbụrụ ahụ bụ ọkwa dị larịị na ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Corsica ma na-atụ anya na ọ ga-ejedebe ọsọ ọsọ, Mark Cavendish na-agba ọsọ ma si otú a bụrụ Maillot chọrọ inweta Jaune maka onye ndu ya.
Njegharị ahụ malitere enweghị obi ụtọ maka ọkacha mmasị kachasị Chris Froome sitere na Team Sky, ebe ọ dara na mpaghara nọpụrụ iche tupu mmalite mmalite nke ogbo ahụ, n'agbanyeghị na ọ merụrụ ahụ. Mgbe ọkọlọtọ ahụ gosipụtara mmalite nke ebe ahụ, ndị na-agba mmadụ ise gosiri ozugbo na ha bụ ndị kachasị mkpa ịgbapụ ụbọchị ahụ - JérômeCousin si Team Europcar, Juan José Lobato si Euskaltel-Euskadi, Belkin Pro Onye na-agba ịnyịnya ịnyịnya Lars Boom, Juan Antonio Flecha as onye nnọchi anya Vacansoleil -DCM, na Cyril Lemoine si Sojasun. Peloton enyeghị ha nnukwu ndu, dịka Omega Pharma-Quick Step-Tempo peloton mere ka oge ọdịiche dị n'etiti nkeji abụọ na atọ maka ọtụtụ ebe ahụ.
Categorydị nke anọ, Cote de Sotta, ruru akara 45 kilomita na ogbo ahụ, naanị ịrịgo na njem ụbọchị. Nke a pụtara na onye na-agba ịnyịnya nke mbụ si n'ahịrị gafere ga-abụ onye mbụ ga-eyi uwe nwere akara. Ọ bụ Lobato bu ụzọ gafee, merie Cousin na Boom, na Lobato sere na akwa a kwalitere na njedebe ụbọchị.
N'ebe a ka onye ahụ gbapụrụ ọsọ nọrọ ọdụ wee gbalịa isonyere peloton dị n'azụ ha dị ka profaịlụ dị larịị nke ogbo ahụ mere ka ọ ghara ịdị na-enwe ike ịnọpụ iji nweta mmeri ahụ. Oge ọdịiche bụ naanị 39 sekọnd tupu ya emesịa laghachi na nkeji anọ. Mgbe nkwụsịtụ na peloton ahụ gafere ebe a na-enye nri, e belata ya ọzọ na 40 sekọnd.
Anọ n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ nwara ọzọ ịgbatị ma hapụ ọrụ ha, mana Cousin na-akwọ ụgbọ, ya na ndị otu gbawara niile. Maka mbọ ndị a, a na-enye Cousin ihe nrite Daily Combativity na ngwụcha usoro ahụ. Oge ọdịiche ahụ ruru nkeji anọ, nke mere na ndị na-apụ apụ nwekwara ike ịsọ mpị ọsọ.
Nke a gara Ọganihu tupu Flecha. Nkeji ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, mmadụ atọ n'ime ndị egwuregwu Spen kacha elu, André Greipel, Mark Cavendish na Peter Sagan, gbara ọsọ maka ihe ndị dịịrị ha ma gafere akara ọsọ ahụ n'otu usoro ahụ. Site na 37 kilomita tupu njedebe nke ogbo ahụ, e jidere ndị na-apụ n'èzí na ìgwè ndị kwadebere maka njedebe ikpeazụ a na-atụ anya ya.
N'ime oge a, akụkọ banyere nsogbu na njedebe - otu ụgbọ ala otu Orica GreenEDGE rapaara n'okpuru akara. Ọ dị elu nke ukwuu ịgabiga. Ọ na-akpaghasị oge elektrọnik maka ebe a na-aga, mana ihe kachasị mkpa bụ eziokwu ahụ bụ na ndị na-agba ịnyịnya ígwè ahụ edochaghị agba ọsọ ahụ.
Ndị ọrụ ịgba ọsọ ahụ gbalịrị ịtọhapụ bọs ahụ, ọ nweghị isi, ọtụtụ nkeji ka ndị ọkwọ ụgbọ ahụ na-erukwu nso ma na-eru nso ịgba ọsọ. Mgbe peloton gafere akara nke 10 kilomita ịga, e zigara mkpebi ahụ na redio overrace ịkwaga akara ngwụcha na ọkọlọtọ na-anọchite anya kilomita 3 ịga. N'ime oge ahụ, ihe ọghọm mbu nke ụbọchị ahụ mere, nke, n'etiti ndị ọzọ, tụbara onye mmeri Giro d'Italia 2012 Ryder Hesjedal site na igwe kwụ otu ebe.
Ihe dị ka kilomita isii site na ebumnuche mbụ, ya bụ 3 km site na akara agbazigharị, ndị otu dịka Lotto-Belisol na Cannondale amalitela leadouts.
N'ebe a ụgbọ ala ahụ napụrụ nke ọma n'okpuru agbaru, sorace Officialrac kpebiri ime ka ogbo rụchaa azụ na mbụ agbaru. N'oge a, oke ọdịda dakwasịrị ndị ga-emeri n'ọkwa nke ukwuu, dịka ndị gbara ọsọ Sagan, Cavendish na Matthew Goss niile dara ma ọ bụ ejide ha n'azụ ọdịda ahụ. Greipel, n'aka nke ya, nwere ike iguzosi ike ma na-agba ọsọ ahụ site na ọdịda abụọ ahụ, mana nkwarụ ọrụ mechiri ohere ya nke mmeri na akwa edo edo.
Onye German ya, Marcel Kittel dị afọ 24 si otu Argos-Shimano, bụ onye ọkwọ ụgbọ ala nke ritere uru n'ọgba aghara nke ụbọchị ahụ wee jiri nsọpụrụ na-acha ọcha na-acha ọcha na-asọpụrụ ọkwa ahụ. Enweghị oghere oge na ebe ahụ - enyere ndị ọzọ 197 nọ n'ọhịa otu oge ahụ Kittel. Na mgbakwunye na ndị ọgba ọsọ na-efunahụ ohere nke mmeri, ụfọdụ ndị na-agba mgba na ndị ama ama ama ama daa.
Alberto Contador dara na ebe mmerụ ahụ ya esighi ike ịmanye ya ịhapụ agbụrụ ahụ, o welitere nchegbu na ha nwere ike igbochi ya ịnyagharị n'ọnọdụ kachasị maka oge ikpe na-abịanụ. Tony Martin na Ted King enweela nkwado kachasị njọ; Martin nwere nsogbu mkparịta ụka na ngụgụ ngụgụ nke gụnyere mmerụ anụ ahụ dị nro na ọnya ubu miri emi, Eze merụkwara ahụ nke ukwuu na ikekwe ubu gbajiri agbaji. Tejay van Garderen, Philippe Gilbert, Gert Steegmans, Janez Brajkovič, Tony Gallopin na Murilo Fischer dakwara.
GeraintThomas dara ma merie ntutu isi ya na ihe o mere. Mgbe emechara egwuregwu ahụ, Cavendish, onye ọkwọ ụgbọ ala Lotto Belisol Greg Henderson na onye isi otu FDJ.fr bụ Marc Madiot gosipụtara na iwe ha adịghị mma maka njikwa agbụrụ ahụ n'ihi na ha ebughaalala akara azụ na akara mbụ ahụ mgbe ndị otu ahụ na-agbanwe n'ọsọ ọsọ ọsọ ahụ zubere iche zuru ike na ọkọlọtọ 3 km.
Nkatọ Henderson lekwasịrị anya na mmetụta mgbanwe dị ngwa nwere na akụkụ asọmpi nke agbụrụ ahụ, ebe Cavendish na Madiot na-echegbu onwe ha banyere otu ha si emetụta nchekwa ọkwọ ụgbọ ala. A kpara Orica-GreenEDGE ntaramahụhụ 2,000 Swiss franc n'ihi ihe ahụ merenụ maka 'ịgbaso usoro maka ugbo ala nke ndị otu enyemaka na-erute ebe a na-aga'. N'aka nke ya, onye mmeri mmeri Kittel kwupụtara na ya anụghị ntuziaka maka redio agbụrụ ahụ maka mmezigharị ya na ọkọlọtọ 3km, nke gosipụtara na o nyeere aka lekwasị anya n'ịgba ọsọ siri ike maka akara nke mbụ na nsọpụrụ ụbọchị ahụ.
Oge 230 June 2013 - Bastia ruo Ajaccio, 156 km Njem ahụ gafere agwaetiti ahụ gaa Ajaccio na ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ, nke nwere akara anọ nwere akara, gụnyere ụdị 2 Col de Vizzavona) mgbe 95 kilomita na otu 3 rịgoro 12 km tupu emecha. Beganbọchị malitere na mwakpo mmeghe n'ime kilomita mbụ na nguzobe nke ndị na-apụ apụ ụbọchị na akara 6 kilomita. Nkwụsị ahụ gụnyere Rubén Pérez si Euskaltel-Euskadi, Lars Boom si Belkin Pro Cycling, David Veilleux si Team Europcarrider na Blel Kadri si Ag2r-La Mondiale wee mụbaa ndu ha na nkeji atọ na elekere mbụ nke ọsọ ahụ.
Ọganihu gafere n'etiti agba ọsọ n'ihu ndị agbụrụ ya na-enupụ isi, ebe André Greipel duuru peloton ahụ n'otu ebe na Cannondales tiri Peter Sagan ihe. Ndị anọ ahụ malitere ịmalite nrịgo nke Col de Bellagranajo site na mbu nke 1'50 ', nke belatara na 1'00' na nzuko nke ịrịgo ahụ. Veilleux na Kadri kewapụrụ ndị na-asọmpi ha na mbido nke ịrịgo nke abụọ, ebe onye otu egwuregwu Veilleux bụ Thomas Voeckler si n'ọhịa wakporo, mana eweghachitere ya ngwa ngwa.
N'oge a, e hiwere otu ìgwè, na mgbakwunye na akwa edo edo Marcel Kittel, gụnyere ndị ọzọ na-agba ọsọ na njem ahụ. Pierre Rolland wakporo site na peloton, Sojasuns Brice Feillu sochiri. Rolland rutere ndị na-apụ apụ ma bụrụ onye mbụ gafere nzukọ ahụ, mana Col de Vizzavona peloton meriri ya mgbe FDJ.fr na Team Sky gbasiri mbọ ike.
Na ngwụsị ikpeazụ nke ụbọchị ahụ, Cyril Gautier si Team Europcar, Chris Froome na Juan Antonio Flecha si Vacansoleil-DCM mere mwakpo dị iche; nke ọ bụla agaghị nke ọma. 7 kilomita site na ngwụcha, Sylvain Chavanel wakporo ma Jan Bakelants si na RadioShack-Leopard, Gorka Izagirre si Euskaltel-Euskadirider, Manuele Mori si Lampre-Merida, Jakob Fuglsang si Astana na Flecha kwadoro ya. Peloton na-eduga na-ewere otu n'otu site na otu breakaway ruo mgbe naanị ndị Bakelants fọdụrụ.
Ndị na-eme achịcha gafere akara nke abụọ tupu Sagan wee buru mmeri mbụ ya na agba odo. Oge nke 31 Julaị 2013 - Ajaccio na Calvi, 145.5 km ụbọchị nke atọ na nke ikpeazụ na Corsica, agbụrụ ahụ laghachitere ebe ugwu n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ jupụtara na obere obere nrịgo, gụnyere obere ma dị elu nke Col de Marsolino nke ụdị 2.13 km site na njedebe na Calvi.
Simon Gerrans meriri ebe ahụ. Oge nke 42, Julaị 2013 - Nice to Nice, 25km oge ikpe otu oge na mpaghara French bụ oge ikpe otu oge nke otu ọ bụla tufuru oge ịgafe njedebe. Ọsọ ahụ malitere na Jardin Albert Iand wee gafee n'okporo ámá ndị dị na Nice ruo mgbe 1.5 kilomita gachara Promenade des Anglais.
Thezọ ahụ sochiri kilomita 6.5 nke ụsọ oké osimiri tupu ịmalite alaka ugwu na Nice Côte d'Azur Airport iji soro Var Valley. Oge njikwa ahụ bịara mgbe 13 kilomita gachara, mgbe agbụrụ ahụ tụgharịrị n'ebe ndịda wee laghachi Jardin Albert I site na Promenade des Anglais.
Onye ọgba tum tum America bụ Ted King, bụ onye tara ahụhụ site na mmerụ ahụ ubu, amachibidoro ya na njem ahụ mgbe ọ nọsịrị igwe kwụ otu ebe naanị ya ma mechaa sekọnd asaa n'èzí oge nkwụsị. Ọtụtụ kwenyere na ndị isi agbụrụ ahụ kwesịrị iburu obi ike ya mgbe ha gwụchara ma nye ya ohere ịga n'ihu njem ahụ. Oge nke 53 July 2013 - Cagnes-sur-Mer ruo Marseille, 228.5 kilomita nke ise were ndị na-agba ịnyịnya ọdịda anyanwụ site na Provence wee gafee obere ugwu anọ etinyere tupu ha erute n'ọdụ ụgbọ mmiri Marseille na Parc Borély, n'ebe ndịda nke etiti obodo ahụ, ejedebe.
Mark Cavendish meriri ogbo nke 24th Tour de France mmeri nke ọrụ ya. Oge nke 64 Julaị 2013 - Aix-en-Provence ruo Montpellier, 176.5 km agbụrụ ahụ gara n'ihu ọdịda anyanwụ site na ndịda France banye na Languedoc.
Ọ bụ André Greipel meriri n'ọgbọ ahụ na agba ọsọ ahụ. Ogbo 75 July 2013 - Montpellier na Albi, 205.5 km Nke a mere ka ndị na-agba ịnyịnya nọ na mgbago ugwu-ọdịda anyanwụ site na Monts de Lacaune, gụnyere ịrịgo nke Col des 13 Vents na Col de la Croix de Mounis nke ụdị 2.
Mgbe ha gafere obodo nke Lacaune, agbụrụ ahụ dara karịa obere ugwu abụọ ruo n'isi na World Heritage City of Albi. Peter Sagan meriri ebe a na agba oso.Mgbe 8 July 6, 2013 - Castres to Ax 3 Domaines, 195 kmMgbe ebidola nke dị otu narị kilomita na iri abụọ, agba nke asatọ gosipụtara ugwu izizi nke njem ahụ, tinyere ịrịgo nke Hors des Port de Atiya Pailhères bụ ebe kachasị elu nke njegharị 2013 na 2,001 m.
Onye mbụ na-agba ịnyịnya ịgafe elu ugwu ahụ, Nairo Quintanawon si na ndị Movistar, ihe ncheta Henri Desgrange. Ihe mgbaru ọsọ ahụ bụ na Ax 3 Domaines ski ebe na 1,375 m, njedebe ikpeazụ bụ 7.8 kilomita na 670 m na gradient nkezi nke 8.6%.
Na njedebe ikpeazụ, ndị na-asọmpi GC nọ na mbu maka maillot jaune na ọgụ izizi nke njegharị a. Johnny Hoogerland wakporo ozugbo ọkọlọtọ dara, ndị ọkwọ ụgbọala atọ ndị ọzọ nyekwara aka ngwa ngwa: Jean-Marc Marino, ChristopheRiblon na Rudy Molard. N'ime ụzọ abụọ ụzọ atọ nke ụzọ ahụ, otu ahụ meghere oghere nke ihe dị ka nkeji itoolu wee gafee ebe Sprint na 117 km.
Laa azụ na ngalaba, André Greipel weghaara akara ọsọ n'ihu Peter Sagan na Mark Cavendish. Oge-ọsọ ahụ ruru ala ụkwụ nke Port de Pailhères, ndị otu na-eduga naanị nwere isi na-erughi nkeji abụọ. Hoogerland gbalịrị ịhapụ ndị ibe ya na 50 kilomita site na njedebe tupu eweghachite ha.
Riblon wee buso agha nke aka ya ma wuru onye ndu ya na ndi ozo. RobertGesink bụ onye mbụ na-agba ịnyịnya ọgụ site na peloton, na-esote ọgụ sitere n'aka Thomas Voeckler. N'oge a, onye nwe onye na-acha odo odo bụ Daryl Impey kwụsịrị.
Quintana malitere mwakpo nke ya 34 kilomita site na iche; Voeckler, Gesink na Riblon ngwa ngwa jidere ma gafere. Pierre Rolland na Igor Antón gbalịrị ịgbaso, mana Quintana wuru ụzọ 55 nke abụọ n'isi otu na-achụ ndị nọ n'elu elu ugwu ahụ. Rolland ga-erute Quintana na njedebe nke ọdịda ahụ mana ọ dara ngwa ngwa ka ndị na-agba ịnyịnya malitere ịrịgo Ax 3 Domaines.
A na-agbagharị ndị ọkwọ ụgbọala ahụ n'azụ nke ìgwè na-achụ ha ruo mgbe e nwere naanị ndị ọkwọ ụgbọala ise n'okpuru 10 kilomita site na njedebe: Team Sky drivers ChrisFroome na Richie Porte, onye otu Quintana Alejandro Valverde na Team Saxo-Tinkoff na Alberto Contador na Roman Kreuziger. Porte na Froome, bụ ndị wuru obere ọdịiche dị n’etiti ha na ndị ọkwọ ụgbọala atọ ndị ọzọ, n’oge na-adịghị anya jidere Quintana; Nke a kpaliri Froome ịwakpo onwe ya n'ugwu ahụ. Froome ji nke nta nke nta wuo ibu ka ọ gbaru ma banye na-acha odo odo.
N'azụ ha, Valverde gbalịrị ịchụ Froome tupu Porte ejide ya, onye were nkasi obi banye banye ebe nke abụọ. Contador na Kreuziger lụrụ ọgụ ma Belkin Pro Cycling Duo Bauke Mollema na Laurensten Dam na Mikel Nieve si Euskaltel-Euskadi merie ha. Oge nke 97 Julaị 2013 - Saint-Girons na Bagnères-de-Bigorre, 168.5 km Oge nke abụọ na Pyrenees duru obere oge ka mbido Col de Portet d'Aspet nke udi nke abụọ, nke ụzọ anọ na-esote nke otu 1: Col de Menté), Col de Peyresourde), Col de Val Louron-Azet) na La Hourquette d'Ancizan).
Nke a bụ mpaghara 'ala'. Mgbe ọrụ Froome na Team Sky nọ na Ax 3 Domaines, Movistar na Garmin wakporo site na mmalite. N'agbanyeghị inwe ike ịgbaso mwakpo ahụ, ndị isi tụbara Chris Froome site na mbọ nke Richie Porte ma mesịa tufuo minit 10.
N'ihi ya, Froome nọpụrụ iche maka ọtụtụ oge ahụ ma nwee ike ịkwụsị ọgụ ọtụtụ ugboro site na Nairo Quintana na njedebe ikpeazụ. Oge mbuso agha na njedebe nke Jakob Fuglsang na Dan Martin gbanahụrụ na Irish kwụsịrị Fuglsang iji merie ebe ahụ. Ndị ọzọ na-eduzi ndị ọkwọ ụgbọ ala, na-ewepu Porte, bịara n'ìgwè n'azụ Martin.
Oge 109 July 2013 - Saint-Gildas-des-Bois na Saint-Malo, 197 km Stage 1110 July 2013 - Avranches na Mont Saint-Michel, 33 km, ntụle ikpe oge ọ bụla.
Onye meriri taa?
Wout van Aertmmeriiheogbo!!! Onye Belgium dị afọ 26 na-eme akụkọ ihe mere eme site nana-emerimbụ t'ẹ b'ọ dụogbonkeNjegharịde France iji banye ugwu abụọ nke Mont Ventoux.4 awa gara aga
Kedu ebe kachasị sie ike na Tour de France?
Ọ bụrụ na ị lelee anya na ngwungwu a nke ndị na-agba ịnyịnya na Tour de France, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị kacha mma agba ịnyịnya ígwè n'ụwa. Back laghachila ebe a. Ha na-aga n'ihu, ma na-ezu ike ebe ndị otu ha nọ n'ihu na-arụ ọtụtụ ọrụ.
A na-akpọ usoro a edepụta ihe yana ọ na-enyere ha aka ịlanarị ọsọ izu atọ site na France. Mana naanị n'akụkụ ndị a nke ụzọ ka eserese miri emi na-eme ọdịiche dị iche: ogologo, nke dị larịị na nke ugwu. Mee elu mee ala, ndị ọkwọ ụgbọala a na-erute usoro nke ha na-enweghị ike ịtụkwasị ndị ọzọ obi.
The Tour de France malitere dị ka nnwale siri ike iji nwetakwuo mbipụta nke akwụkwọ akụkọ egwuregwu L. maka ire ere. Akwụkwọ akụkọ ahụ nọ na nsogbu, ya mere na 1903 onye nchịkọta akụkọ ya, Henri Desgranges, haziri asọmpi ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè nke ụbọchị 19, kilomita 2,400 n’ofe mba ahụ.
Na 1910, Alphonse Steines, otu n'ime ndị dere Desgranges, tụrụ aro ịgbakwunye ntụgharị ọhụrụ na ụzọ: tourmalet. Ọ bụ ugwu dị obi ọjọọ nke dị kilomita 19 na elu nke 1400 mita na nzuko ahụ. Iji hụ ma nke a ọ ga-ekwe omume, Steines banyere n'ime ụgbọ ala ya iji gbagoo.
Ọ gbagoro, mana ụgbọ ala ya araparare na snow, tara ahụhụ site na hypothermia ma ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ. Ka o sina dị, o zigara ozi teligram na-agụ: Tourmalet agafeela. Goodzọ dị ezigbo mma.
N'afọ a ụzọ a nwere usoro 21 karịa ụbọchị 23. Ọ nwere 30 isi climbs; asaa n'ime ha so na ngalaba kacha sie ike nke njegharị ahụ. Gụnyere Tourmalet, nke dị maka oge 86th.
N'ebe a, ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbakọ otu ihe a na-akpọ peloton. Ọ na - enyere ndị na - agba ịnyịnya ígwè aka ịchekwa ike site na ịnọdụ ala n’azụ onye na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ịnya ụgbọ mmiri. N’ọsọ dị elu, ndị ọkwọ ụgbọala na-eji ike ha niile eme ihe maka ịsọ mpi ikuku.
N'ebe a na isi nke peloton, onye na-agba ịnyịnya Tour de France ga-ewepụta opekata mpe 300 watts. M malie n’ịnyịnya ígwè iji hụ otú ọ dị na ọ bụ naanị kilomita abụọ na 300 watts bụ n’ezie siri ike. Maka ntụnyere: ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala nọ n’azụ ihu peloton, naanị ya chọrọ iwepụta ihe dịka 240 watts ka ọ kwaga n’otu ọsọ ahụ.
Ijide watts 240 maka kilomita abụọ nwere mmetụta dị mfe karị. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ abụọ a ga-emecha ọkwa dị larịị kilomita 200 n'otu oge, otu ga-ada mbà karịa nke ọzọ. Ọ bụ ya mere ị ga - eji hụ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala kachasị mma na njem a.
Ha na-akpọkọta ndị otu egwuregwu ha bụ ndị ọrụ ha bụ ịrụ ọrụ siri ike ugbu a ka onye kachasị gbaa igwe kwụ otu ebe zuru ike maka akụkụ kachasị sie ike, ugwu. Ebe ha kwesiri ịnọ naanị ha. Ka peloton ahụ bidoro na-arịgo elu elu, ọ na-ebelata.
Na usoro a, agbụrụ ahụ abụghị ihe na-alụ ọgụ megide ifufe dị ka ike ndọda, nke na-emetụta ndị ọkwọ ụgbọala niile na peloton. Yabụ ugbu a ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla aghagoro ike dị ukwuu n'ihu na azụ iji nwee ike ijigide usoro ahụ. Dị ka ihe atụ, n’afọ 2010, onye na-agba ịnyịnya ígwè Denmark bụ Chris Anker Sorensen rutere n’elu ugwu nke Tourmalet. “Legodị ihu Chris Anker Sorenesen.
Ọ na-enye 415 watts ihe karịrị 11 nkeji. “... ihu nke Chris Anker Sorensen ugbu a, onye na - ekesa ihe mgbu ahụ.
N'ebe a, ọ ruru ihe dị egwu 590 watts. 'nnukwu ịnya ụgbọ ala site n'aka Chris Anker Sorenson, mana ogologo oge ka ọ ga-aga ije? “Ugbu a lee onye America na-agba ịnyịnya bụ Chris Horner. Agbanyeghị na ọ nọ n'ọtụtụ ọnọdụ n'azụ Sorenson, arụmọrụ ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Ọsọ ọsọ Sorenson rịgoro, ọ na-esiri ya ike ka ndị ọzọ peloton nọgide na-aga n'ihu. Ma otu a ka nguzobe ahụ siri malite ka ndị n’adịghị ike nọ n’azụ na-ada n’azụ. Nke a bụ oge n'ọsọ ahụ mgbe ndị na-agba ịnyịnya kacha mma na-agbanwe site na idepụta n'ike nke aka ha ịga n'ihu.
Andy Schleck mechara wakpoo ma Alberto Contador hapụrụ ya. Ọsọ ahụ dakwasịrị n'azụ ha dị ka mmadụ abụọ kachasị mma ebe a: Andy Schleck si Luxembourg na Alberto Contador si Spain, bụ onye gbara na azụ nke peloton n'oge ogologo oge dị larịị. Mana lee, ha agbago ọkara Tourmalet wee pụọ maka mmeri. n'ime kilomita asatọ gara aga, onye ọ bụla kwesịrị iwepụta ihe karịrị 400 watts.
Contador na akwa edo edo bụ onye ndu nke Tour de France, mana naanị sekọnd asatọ n'ihu. Na nke abụọ bụ Schleck, onye ga-anwa ida ya na ịrị elu a. 'Andy Schleck na-anya dị ka nwoke nwere' Ọ gara n'isi ya ruo n'isi
Ọ bụ Schleck n’aka nri. Kontador! Schleck nwere mmeri! Contador batara nke abụọ! Schleck fọrọ nke nta ka ọ kwapụ Contador n'elu nke Tourmalet iji merie ebe ahụ. Mana ebe ọ bụ na ọ tụfughi ya, Contador jigidere ndu ya niile wee merie Tour de France.
Typedị ihe nkiri a ga-ekwe omume naanị n’elu ugwu, ụzọ nke afọ a na-emekwa ka ịrịgo dị ezigbo mkpa. A na-akpọ njegharị afọ a nke kachasị elu na akụkọ ntolite n'ihi ọtụtụ ịrịgo n'izu atọ. O nwere ugwu asaa a na-eme naanị n’ime otu ụbọchị.
Onye meriri ogbo 11 2020?
Tour de France2020: Caleb Ewan-enweta mmeri 11, Peter Sagan kụrụ na ntaramahụhụ.Sep 10 2020
Kedu onye meriri Tour de France 2020?
Slovenian rookieTadej Pogačarmerie Tour de France na Sọnde, na-agbago mmeri na Paris na onye na-agba ọsọ edo nke onye agbụrụ ahụ mgbe ọ dị afọ 21.Sep 20 2020
Ego ole ka Mark Cavendish bara?
Akara Cavendishnetkwesịrị:Akara Cavendishbụ onye na-agba ịnyịnya ígwè Manx ọkachamara na-agba ọsọ nwere ntanetịkwesịrịnke $ 10.Akara CavendishAmụrụ na Douglas, Isle nke Mmadụ na Mee 21, 1985.
Ugboro ole ka Tour de France nwere akara Mark Cavendish?
Cavendishdị ugbu a ruo 32Tour de Franceọrụogbo enweta nkwanye, na-enwe mmetụta uche 31st ụbọchị abụọ gara aga. Ihe omumebụahụghị ma ọ bụ adịghị. Mgbe a jụrụ ya otu abụọmmeritụnyere,Cavendishkwetara na ọ na-akpali ya site na mmeri mbụ ya na ọsọ ahụ. “Anyị nwetara obi ike (site na nke mbụmerie).5 ụbọchị gara aga
Taa, ndị egwuregwu a ma ama ga-eme naanịkpochaa uwe ogologo ọkpa hagaa n'ihu. Buru n’uche ihe na-eme mgbendị na-agba ịnyịnya ígwèamanye kakpochaa uwe ogologo ọkpa ha. Ndị ọkachamara na-asọ mpi ruo n'ókè na ahụ ha karịrị nrụgide - ọ na-adị ka ọ na-anwụ anwụ.Jul 21 2015
Kedu onye meriri ọhụụ nke Tour de France?
Ben O'Connormmerinke mbuNtughari Tour de France. Ọ ga-agbago n'ogo niile dịka ọ dịmeriesite na ọ dịkarịa ala minit atọ. Nke a bụ njem dị ịtụnanya si Australia.4 ụbọchị gara aga
Kedu ọkwa ole Caleb Ewan meriri?
Amaghi, WHOmerieabụọnkebina Giro d'Italia nabụemegide iji tinye ya ọrụ iseogbo enweta nkwanyena Tour, ga-now ịhụ makaogbo enweta nkwanyena njem ikpeazụ nke afọ ahụ, Vuelta a España.06.28.2021
Ebee ka agba nke 1 nke Tour de France gwụchara?
Ọ kọrọ na nke mbụ 1 ga-eburu ndị na-agba ịnyịnya n'etiti Brest na Landernau, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, na-esote usoro nke abụọ ga-esi na Perros-Guirec gaa n'ụsọ ebe ugwu ruo na ngwụcha ngwụcha na Mûr de Bretagne.
Afọ ole bụ onye mmeri nke Tour de France?
Nwa okorobịa ahụ dị afọ iri abụọ na ise, onye aha ya bụ nwoke, kwuru, sị: “Ahapụrụ m ya ka m laa, jide ya wiil ya wee kpọrọ ya n'ahịrị.
Ebee ka ngwugwu dị larịị dị na Tour de France?
Flat parcours bụ oge na ogbo 1 na 3 na Nice, 5 na Privas, nke asaa na Lavaur, nke 10 na Ile de Re Saint-Martin-de-Re, nke 11 na Poiters, nke 14 na Lyon, nkebi nke 19 na Champagnole na ogbo nke 21 na Paris. 2020zọ nke 2020 Tour de France ga-adabara ndị na-arị elu ọcha nke peloton.